गुरुजी ट्याक्सीमा ‘छुस’ छ ?
केही समय अघिको कुरा हो । निक्कै लामो समय परदॆशमा विताएर सम्भवत मेरो जीवन अवधिमा आएको एकमात्र अवसर संविधान सभाको चुनावको लागि घरदेश पुगेको थिए । धेरै कुरा उमेरमा निर्भर रहन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार यस पटक मलाई मोटर वाइकमा मनखुसि हुइकिन मन लागेन । काठमाण्डौको अस्तब्यस्त ट्राफिक ब्यवस्थाले त झन राजधानी एकैछिन पनि नबसु झै लाग्यो । चुनाव ताका साच्चै नै काठमाण्डौ राज्य विहीन थियो । कुनै ब्यक्तिले कसैको कतैको डर मान्ने गरेको पाइन । स्वयं आफू जोगिनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जस्तो लाग्थ्यो । देश कै एउटा राजनैतिक महोत्सव भनौ संविधान संभा निर्वाचनको वेला बाँध्यात्मकवस धेरै पटक अर्थात कहिलेकहि दिनभर जस्तो ट्याक्सीमा हिड्नु पथ्र्यो । एउटै दुरीको एउटै बाटोमा ट्याक्सी भाडा फरकफरक उठ्थ्यो । यति सम्मकी कहिले त पत्यारै नलाग्ने भाडा उठ्थ्यो । ट्याक्सी हकाइ पनि फरकफरक हुन्थ्यो ।
काठमाडौको ट्राफिक त्यसमा कतैकतै बिग्रिएको बाटो अनि ड्राइभरको हकाइ धेरै अनौठो लाग्थ्यो । झण्डै डेड महिनाको काठमाण्डौ बसाईमा सधै जसो ट्यासी चलाउनु मेरो नियति थियो । कहिले ट्याक्सीको धनीनै ड्राइभर काम गरेर हिडेको भेटे र प्राय जसो मालिकको ट्याक्सी चलाउने ड्राइभरहरुलाई भेटे । ती ड्राइभरहरु कोहि पाका हुन्थे कोहि तन्नेरी र कोहि चाहि दादागीरी गर्ने जस्ता भेटे । विभिन्न ट्याक्सी ड्राइभरहरु संग भलाकुसारी गर्नेक्रममा चाहिन्दो नचाहिन्दो धेरै कुराहरुको जानकारी मिल्थ्यो । ट्याक्सी संगको उनीहरुको जीवन निक्कै कष्टप्रद देखे । हुन त राजनैतिक अस्थिरताले सारा देशवासी नै मारमा परेको वेला उनीहरुको मात्र त्यो समस्या थिएन । जो ट्याक्सी चलाएरै काठमाण्डौमा स-परिवार बसेका थिए उनीहरुलाई नानी पढाउने घरभाडा तिर्ने हातमुख जोड्ने समस्या विरक्त्त लाग्दो थियो ।
एक साँझको कुरा नयाँ वानेश्वर चोकबाट ललितपुर आउनु पर्नेभयो । हतारको कारण म सिधै ट्याक्सी चढे । बाटोमा ट्राफिक खासै थिएन असाधारण तरिकाले उसले ट्याक्सी हाक्यो । वेलाबेला हर्न पनि लगाउथ्यो । म स्वयंलाइ पनि ड्राइभिङको बारे थोरबहूत ज्ञान भएकोले त्यो ड्राइभरको हकाइ प्रति शंका लाग्यो । त्यसदिन मैले केही सोधिन । अर्को पटक एउटा पातलो ज्यान भएको ड्राइभर थियो उ अलि बोलाइलो थियो र भर्खरै देखि मात्र यो काम गर्न शुरु गरेको रहेछ । उसलाई मैले सोधे ए भाई यो ट्याक्सीहरुले एउटै दुरीमा किन फरकफरक मिटर भाडा उठाउछ उसले भ्याटै मुख खोल्यो l थियो होला नी दाई सेटिङ नै त्यस्तो । अब मेरो जिज्ञास बढेर आयो कस्तो हो त्यो सेटिङ ? अर्कोपटक अर्कै ट्यासीमा फेरी बाटो काट्ने गफ झिक्दै ए दाई ट्याक्सीमा पैसा धेरै उठ्ने मिटरको सेटिङ हुन्छ रे नी हो खै सर हामीलाई त थाह भएन उमेरले निक्कै पाको ड्राइभरले जवाफ दियो । फेरी अर्को पटक अलि हल्ला गर्ने ड्राइभर भेटे ए भाई त्यो तिम्रो मिटरमा पैसा धेरै उठ्ने सेटिङ चाहि नहाल है मैले भने । ए दाइले छुस (अर्थिङ) को कुरा गर्नुभएको त्यो त नाइट ट्याक्सीमा हुन्छ दाई यो त मेरो आफ्नै गाडी हो त्यस्तो यसमा छैन ।
अर्को पटक ठमेलबाट अबेर घर फर्कनु पर्नेभयो ट्याक्सी समाते निर्धक्क साथ भने भाई मिटरमा छुस चाहि नथप है यहाबाट मेरो घर पुग्न कति लाग्छ मलाइ थाह छ । यस पटक उसलाई कुरा लुकाउने मौका भएन र बोल्न थाल्यो । दाई तेल महङ्गो छ साहूको गाडी हो प्रत्येक दिनको पैसा मालिकलाई दिनै पर्छ । टिप भने जस्तो लाग्दैन । परिवार यहि छ पाल्नै पर् यो । यसो अलिअलि त छ सर । मैले भने ए तिमी त बद्मास रहेछौ उसले जवाफ दियो होइन सर यहाको ९५ प्रतिशत ट्याक्सीमा छुस हुन्छ । ट्याक्सी घरअगाडि पुग्यो भाडा अघिल्लो पटकको भन्दा अलि बढि उठ्यो तर उसको दुखेसो र जानकारीको कारण मेरो मन प्रसन्न भयो र खुसिसाथ तिरे । अब मलाई ट्याक्सी जीवनको बारेमा निक्कै जानकारी भयो । ट्याक्सी चढ्ने वित्तिकै पुन सोधिखोजि गर्न थालि हाल्थे । ए भाई आज चाहि तिमीले छुस लागाउनु पर्छ है ड्राइभर मुसुक्क हाँस्यो । साच्चै भनेको भाई छुस लागाउनु l अनि पैसा बढि उठ्छ नी त्यो तिर्नुहुन्छ प्रतिप्रश्न गर् यो । ल म पैसा तिर्न राजी छु छुस लागाउ । उसलाई पनि नौलो लागेछ छुस लागाएर देखायो म रोमान्चित भए । ए भाइ ल भन अरु कुनकुन ठाँउमा छुस राखेको हुन्छ दाई मेरो चाहि दाहिने कुहिनाले छुने गरि ढोकाको भित्रिपट्टि नदेखिने तवरले राखेको छु । अनि अरुहरुले चाहि कता राख्छन त खोइदाई अरुले यो हर्न लगाउने ठाँउनेर राख्छन कसैले खुट्टाले छुन मिल्नेगरि एस्किलेटर नजिक राख्छन ।
ठाँउमा पुग्न अगावै पुन छुस लागाउन लागाए उसले छुसलाई कुहिनाले छोयो अगाडि राखिएको मिटर फनन घुमेर ७५ रुपैयाबाट एकैचोटि ९५ पुग्यो । ठाँउ आयो म उत्रिए ए भाइ तिमीहरु त बद्मास हुदा रहेछौ । दाइले भनेर मात्र मैले देखाएको अब के कुरा दाई मिटरमै पनि त डेणी हिर्काउने बनाएका हुन्छन । यो ड्राइभरलाई खुसि बनाएर अरु धेरै कुरा लिनुछ त्यसैले कुरा उठान गाँउ परिवार देखि लिएर उसको प्रेम कहानी सम्म पुर् याए र एकप्रकार उसको मनको कुरा लिए पछि पुन त्यहि छुसको कुरा संगै थपिएको डेणी मिटरमा लगे । यो मिटरहरु चाहि दाई नेपालमा इटालियन कोरियन र अमेरिकन बढि चलाइन्छ त्यसमा कोरियन चाहि अलि सजिलो छ डेणी बनाउन । अनि डेणी चाहि कहा बनाउने नी त्यो दाई हामीले नापतौलमा मिटर लैजानु पर्छ त्यतिखेर नै एकदुइ सय दिए पछि उनीहरुले नै एक किलोमिटर गुढे बापत २० रुपैया हुनुपर्ने ठाँउमा २४ रुपैया उठ्ने बनाईदिन्छ । अनि टाँचा लगाइ दिन्छ । अब जति हिर्काउने मिटरको कांटा बनाउन चाहानुहुन्छ त्यतिनै हान्ने पनि बनाइदिन्छ । बढि कांटा हान्ने बनाएमा धेरै समस्या आउछ दाई । लौ भाई मलाइ भन कस्तो वेला र कसरी चाहि ट्याक्सी बढि भाडा लिन्छ दाइ पहिलो नम्बर तपाइलाई यहाको ठाँउको बारेमा थाह छ छैन त्यो विचार गर्छन यदि तपाइलाई थाहछैन भन्ने थाह पाएमा अत्यधिक छुस लगाउछन् । ल भन त ड्राइभरले छुस लगाउदैछ भनेर चाहि कसरी थाह पाउने ? हेर्नुहोस दाई यदि ट्याक्सी राम्रो बाटोमा पनि कुनैबेला स्पीडमा कुदाउछ हर्न बजाउछ अलि बढि हल्लाउछ भने त्यसवेला छुस थप्दैछ भनेर शंका गरे हुन्छ किन की त्यसवेला ड्राइभर चाहन्छ प्यासेन्जरले ध्यान चलिरहेको मिटरमा नभई आफै सम्हालिन ध्यानदेवस ।
मेरो गन्तब्यस्थान आइपुग्यो हितैषी ड्राइभरको फोन नम्बर टिपे र फेरी भेट्ने वाचा गर्दै ट्यासीलाई छाडि दिए । यसपटक म साथि संग छु । हामी जुनसुकै ट्याक्सी ड्राइभरलाई मनले जितेरै छुसको बारे कुरा झिकेर इल्लिबिल्ल बनाउन थालेका छौ । हामी नारायण गोपाल चोकबाट बागबजार आउनु थियो । ट्याक्सीमा चढ्दाचढ्दै ड्राइभर दाई हामीलाई त तपाईको मिटरमा सरर छुस चढेको मनपर्छ । ट्याक्सी अगाडी गुड्यो । ट्याक्सीको मिटर पनि इटालियन राम्रो रहेछ । यो मिटर त लक्षिनको हुन्छ पैसा भुरुरुरै झार्छ । हाम्रो हल्ला पनि बढ्दै गएको थियो । हामीलाई कुन प्रकारको गाडि कस्तो ड्राइभर वास्तै थिएन । अन्तत हाम्रो हल्ला र पेलाइले ड्राइभर हामी तिर फर्केर बोल्यो ए भाइहरुलाई छुस भएको ट्याक्सी चाहिने रहेछ मेरोमा त छुस छैन लौ यतै ओर्लिनुहोस निक्कै लामो दुरी हिडी सकेको ट्याक्सी पनि रोकियो । सधै ट्याक्सी ड्राइभरलाई जित्दै आएको हामी त्यसवेला हार्यौ । ड्राइभर दाई भद्र र बुढा थिए ट्याक्सी पनि कालो कार थियो जर्मनी गाडी झै देखिन्थ्यो भाई यो इलाकामा मैले ट्याक्सी चलाएको २५ बर्ष भयो छुट्नु अघि बुढाले अर्को डाइलग थपे । लाग्यो यो क्षेत्रमा सज्जनबर्गहरु पनि अवश्य छन् । बढि उम्लिए पछि पोखिए झै छुसको बारे चर्चा अलिकम हुन थाल्यो । निर्धक्क बोल्न नसक्दा त छुस हान्दै गर्छन छैन पनि भन्छन् अनि त्यो पैसा पनि तिराउदा रहेछन् । तपाइले सोध्नुहोस त उनीहरुले पहिलो कुरा हुदैन भन्छन् दोस्रो नम्बर मेरोमा चाहि छैन भन्छन तेस्रो नम्बर म त्यस्तो होइन भन्छन् । आखिरमा चाहि सबै ट्याक्सीमा हुन्छ भन्छन् । त्यसो भए म पुलिसलाई रिपोर्ट गर्छु भन्नुहोस उनीहरु भन्छन यो कुरो तपाइले भन्नै पर्दैन पुलिसलाई राम्ररी थाह छ उनीहरुले पनि खान परयो नी भन्छन ।
अलि रिस उठाउदा अरुकुरा आउला की भनेर ए भाई काठमाण्डौमा त सबै बदमास छन हगि तिमीहरु ट्याक्सी ड्राइभरले मिटरमा पनि तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढि उठाउछौ छुस पनि लागाउछौ यसो भगवान संग डर लाग्दैन दाई पहिलो नम्बर मलाई भन्नुहोस कस्तो मान्छे ट्याक्सी चढ्छ अनि दाई नर्बिसनुहोस यो नेपाल हो विदेश होइन । लौ ड्राइभर भाई तिम्रै जित भो ।
[email protected] २ नोभेम्बर २००८